Home Page COVID-19 – Izikolo eziseMason City COVID-19 Ikomkhulu
NjengoMbongi wakho, Ndifuna wazi ukuba silapha ukuxhasa nokukhathalela umbutho wethu ngokunxibelelana ngokungaguqukiyo, izixhobo, kunye nethemba.
Njengoko sisiqhubela phambili ngalo msitho ucelomngeni, Siyaqhubeka nokunxibelelana – ukukwazisa oko sikwaziyo, xa siyayazi. Nceda ucofe apha ngezantsi umyalezo wethu wemihla ngemihla.
Hlala uqhagamshelwe ngexesha lomsitho we-COVID-19
Ngomhla ka-Epreli 6, Siya kutshintshela kwiMeko yokuFunda ekude. Ngelixa abasebenzi bethu belungiselela olu tshintsho, uya kufumana izixhobo ezininzi ezenzelwe umfundi wakho.
Funda nzulu: Ukufunda kude
Indawo yokufunda yomfundi
Funda ngakumbi malunga nokusebenza ngengqondo kweZikolo zaseMason City. Fumana izicwangciso zokulwa ngeli xesha.
Fumana indlela yokufumana i-Chromebook ukuba umntwana wakho akanaso isixhobo. Funda ngendlela yokufumana inkxaso kwiiveki ezizayo.
Akukho mntu kuluntu lwethu kufuneka alambe. Khangela indlela yokufumana ukutya, kunye nendlela i-MCS eyixhasa ngayo iintsapho zethu ejongene nokungakhuseleki kokutya.
Eli lelona xesha libaluleke kakhulu kubantu abaninzi kwindawo esihlala kuyo. Siyazi ukuba iCommetity yethu yeComet ihlala ikulungele ukunceda. Fumana iindlela zokuxhasa iintsapho, amashishini endawo (ngakumbi abo babukeleyo) nabanye abafuna uncedo lwethu.
Jonga iimpendulo kwimibuzo eqhelekileyo yosapho lwethu kunye noluntu.
Imibuzo ye-Corona Virus Iyaphendulwa
Ukusuka kwiSibhedlele saBantwana eCincinnati
Ingakumbi yezixhobo ze-COVID-19
Silapha kuwe ...
Imiyalezo evela kwiinqununu zethu
“Kwanaxa kunzima, Ndiziva ndinethemba kubasebenzi bethu, abafundi noluntu ngenxa yesithili sethu 3 Amawa amakhulu. Sicinga ngabafundi kunye neentsapho zethu ngeli xesha kwaye sifuna ukuba wazi ukuba abasebenzi bethu bezikolo eziphakamileyo zilapha kuwe njengoko siqala lolu hambo lutsha. Ngelixa lo ngumceli mngeni omtsha, Abasebenzi be-MHS bayazingca kakhulu ngokuthi "Hlalani niye eMsindweni" kwaye baphendule kwezi ziganeko ukuze bonke abafundi bethu kunye nosapho bakhule mihla le kwaye baqhubeke nokuzalisekisa inkcubeko yethu yeComet njengabafundi. "
Bobby DoddI-MHS yeNqununu
“Kuyintsikelelo engakanani na ukuba sisebenze kwinkcubeko yethu ye-Comet kunye nokuqonda kwethu i-E + R = O ngaphambi kwesi siganeko se-COVID-19. Ndiziva ndinethamsanqa ukuphendula kumcimbi wethamsanqa noluntu lwethu iMason Comet. ”
ULauren GenteneInqununu yesikolo iMason Middle
“Abasebenzi bethu, abafundi noluntu kuye kwafuneka ukuba bafundise ukulungelelanisa kunye nokuziqhelanisa nokubhabha kwezi veki zimbini zidlulileyo. Abasebenzi kwi-MI “bangabanini boMsantsa” kwaye basebenzela ukuhlala benxibelelana nabafundi kwaye bacwangcise izifundo eziya kuqhubeka nokufunda. Siyalikhumbula ukubona abafundi bethu yonke imihla kodwa sijonge phambili ekuhambeni kunye. Hlala usempilweni kwaye ukhuselekile! Hlala u-MI Womelele!"
U-Eric MesserMason Intermediate Principal
“Kuyichulumancisa ukubona ububele kunye nethemba kwiMEIT yethu. Siyaqhubeka nokuphila ubomi besiqhulo sethu, 'Ububele buqala kunye noM.. Abasebenzi abasisiseko seMason bazibophelele ekuxhaseni abafundi kunye neentsapho zethu. ”
UJavaris PowellIsiseko seNqanaba leMason
"Akukaze kubaluleke kakhulu ukuba uphilele amanqanaba ethu e-Comet Kid kwaye uzingise, uvelwano, ukuguquguquka, ukomelela kunye nethemba. Iintsapho zethu, Abasebenzi kunye nabanye abafundi babelana ngokwabelana ngamabali ngendlela yokuphila ezi mpawu ukutshintsha kobomi okwangoku. Sinebhongo kakhulu ngabantwana bethu baseComet kuluntu lweMason!!"
UMelissa BlyIZiko loBomi bobutsha laseMason
Ukuthathela ingqalelo abaFundi kunye neNtsapho yethu ...
Nokuba kukutya, Impilo yengqondo ixhasa, Itekhnoloji, okanye izixhobo zokufunda - silapha kuluntu lwethu lwaselokishini iMason kunye ne-deerfield.